Waa kuma Ruuxa Quduuska?
Su’aal: Waa kuma Ruuxa Quduuska?
Jawaab: Waxaa jiro many misconceptions ee ku saabsan aqoonsiga Ruuxa Quduuska. Aragtida qaarkood Ruuxa Quduuska sida xooga diinta. Kuwa kale waxay u fahmaan in Ruuxa Quduuska uu yahay sida awood iska yeelka ee Illaah u diyaariyo raacayaasha Ciise. Muxuu Baybalka ka dhahaa aqoonsiga Ruuxa Quduuska? Si fudud u dheh, Baybalka wuxuu ku dhawaaqay in Ruuxa Quduuska uu Illaah yahay. Baybalka sidoo kale wuxuu noosheegayaa in Ruuxa Quduuska uu yahay divine person, ahaanshaha qalbiga ee la jirto maskaxda, dareemayaasha, iyo rabitaanka.
XaqiIQda in Ruuxa Quduuska uu yahay Illaah oo si cad loogu arko Qoraalo badan, oo ay ku jiraan Yooxanaa 5:3-4. Aayada Peter waxay uga imaaneysaa Ananias sida sababta uu ugu beensheegay Ruuxa Quduuska oo u sheegay in uusan “u been sheegin ragga laakin Illaah.” Waa ku dhawaaqid cad ee in been sheegida ee Ruuxa Quduuska u beensheegayo Illaah. Waxaan sidoo kale ogaan karnaa in Ruuxa Quduuska uu Illaah yahay sababtoo ah wuxuu haystaa sifooyinka Illaah. Tusaale ahaan, faafintiisa ee Sabuuradii 139:7-8, “Halkee ayaan ka aadi karaa Ruuxaaga? Halkee ayaan uga qaxi karaa joogitaankaada? Haddii aan aadO kor janada, halkaas ayaaD Joogtaa; haddii aan ka dhigo sariirteyda mid qoto dheer, waxaad halkaas u joogtaa.” Kadib gudaha 1 Korintos 2:10-11, waan aragnaa sifooyinka faafinta ee Ruuxa Quduuska. “Laakin Illaah wuxuu noo sheegay Ruuxiisa. Ruuxa ayaa baarayo dhammaan sheeyada, xittaa waxyaabaha qotoda dheer ee Illaah. Kuwa ka midka ah ragga way ogyihiin afkaaraha ragga marka laga saaro ruuxa ragga ee ku jiro? Isla qaabka ma jiro qof og afkaaraha Illaah aan ka aheyn Ruuxa Quduuska.”
Waxaan ogaan karnaa in Ruuxa Quduuska uu dhabtii yahay qof la xiiriiro sababtoo ah Wuxuu leeyahay maska, dareemo, iyo rabitaan. Ruuxa Quduuska wuxuu u moodaa oo ogyahay (1 Korintos 2:10). Ruuxa Quduuska waa laga caban karaa (Efesos 4:30). Ruuxa inaga ayuu noo shafeecaa (Rooma 8:26-27). Wuxuu ku go’aamiyaa sida waaafaqsan Rabitaankiisa (1 Korintos 12:7-11). Ruuxa Quduuska waa Illaah, Qodka sadexaad ee Halka Illaah. Sida Illaah, Ruuxa Quduuska wuxuu si dhab ugu shaqeyn karaa sida Raaxeeyaha iyo La taliyaha in Ciise balan qaaday inuu noqonayo (Yooxanaa 14:16, 26; 15:26).